Pombi Yekupisa Yekupisa Yekudzoresa mweya
Kana zvasvika pakugadzira imba yekuchenesa nyowani, hombe, uye pamwe sarudzo yekutanga yaunofanirwa kutora ndeyekuti imba yako yekuchenesa ichave ine modular kana yechinyakare kuvakwa. Iko kune mabhenefiti uyeganhurirwa kune yega yeaya sarudzo, uye zvinogona kuve zvakaoma kuona sarudzo chaiyo kune yako yekuchenesa application. Heano edu kutora emamo modular makamuri vs echinyakare kuvaka.
Modular yekuchenesa madziro uye siringi masisitimu anowanzo sanganisira sandwich pani yekuvaka ine aruminiyamu huchi musimboti pakati kwakakurudzira simbi yekunze machira. Zviso zvepaneru izvo zvinowoneswa kune yakachena nzvimbo yekuchengetera zvinowanzo pedzwa nechena hutsanana kupfeka senge PVC uye inotonhora yakasunganidzwa pamwechete kune monolithic mweya wakasimba nharaunda.
Modular Panel Zvayakanakira:
1.Panera akagadzirirwa kupindirana panguva yekumisikidza kuti agadzire zvachose yakavharwa nharaunda ine shoma kwazvo mweya leakage / infiltration.
2.Field kupedza haidiwe. Hapana mubatanidzwa mukomboni sanding, priming kana kupenda.
3.Wall system base inowanzo kupa yakasimba solider kune yakasangana yepasi base, kazhinji isina kusimba poindi mumadziro musangano.
4.Kufamba-padenga masisitimu kunogona kugadzira nzvimbo yekumusoro pamusoro penzvimbo dzekugadzira idzo dzinodzika pane zvido zvekuvhara panguva yekuchengetedza kwese.
5.Most modular cleanroom masystem anogona kupa kana anogona kusanganisa yakachena kamuri mikova uye Hardware yekuchengetedza pamunda kubatana. Masuo anoratidzira pane saiti yakagadzirirwa kuiswa.
1.Makuru epamberi capital kudyara kwemadziro uye siringi masisitimu.
2.Kureba kutungamira-nguva dzekugadzira nguva, kunyepa uye yakadzama submittal zvisikwa.
3.Modular mapaneru ari mashoma anochinjika ekushandurwa kwemunda / shanduko.
4.Kuvaka chimiro kunofanirwa kuve kwakakura zvakakwana kuti utakure mutoro wesarudzo yekufamba-pamusoro siringi masisitimu.
Metal stud yekuvaka ne wallboard yakadai se gypsum kana fiberglass composite yakazara munda wakagadzirwa uye wakaiswa pane saiti. Matare esimbi anoyerwa, akachekwa, akaenderana uye akasungwa munzvimbo inoteverwa pamwe neiyo wallboard yekumisikidza, yekubatanidza komputa, uye akati wandei majasi epende kana yekuwedzera yakapera pamusoro. Denga reacoustical rinogona kuturikwa panzvimbo panzvimbo yemadziro ebhodhi mhando, ine aruminiyamu grid furemu uye siringi matiles ezvinhu zvakasiyana.
Metal Stud Zvakanakira:
1.Kuderera kwepamberi capital investa yezvinhu.
2.Materials anowanzo kuwanikwa zvirinyore kuendesa kunzvimbo.
3.Field kugadziridzwa / shanduko dzinogona kugariswa nyore uye nekukurumidza.
4.Pane hwaro hweruzivo rwakadzama rwezvinhu uye nzira dzekuvaka pakati pemakontrakta mazhinji.
Metal Stud Mutengo:
1.Project mhando inovimba zvakanyanya pamanyepo emumunda kwete munzvimbo dzinodzorwa nefekitori.
2.Pepa-yakavakirwa gypsum bhodhi ine mukana wekuchengetedza fungus kukura senge chakuvhuvhu.
3.Kushanda pamwe nemadziro emabhodhi mapaneru kunogadzira mashecheti ayo anogona kutamira munzvimbo yakaoma yekuita michina panguva yekuisirwa.
4.Harsh yekuchenesa makemikari ekuchenesa anogona kukuvadza madziro emadziro asina kudzivirirwa uye matanho ekuchengetedza.
Nekuwedzera kwekuwanikwa kwema modular mhando masisitimu, mazhinji ematambudziko anoenderana neakanyanya munda akagadzirwa echinyakare matekiniki anoderedzwa. Sezvo indasitiri inofambisa akawanda maitiro eunisheni kuita kune modular nzira, saka zvinogona kuvaka mapurojekiti kusundira iyo miganho yesystem masystem kune yakachena, yakapusa nzira yekuvaka yakachena dzimba.
Nhoroondo zvekugadzira zvivakwa zvakagadzirwa uye zvakavakwa pachishandiswa zvechinyakare zvekuvakisa nzira uye nzira. Kwemakore, Airwoods yakaona mukuwedzera mukushandiswa kwemodular cleanroom mune mazhinji mapurojekiti sevhisi anosanganisira kugadzira mishonga, zvivakwa zvehutano, chishandiso chekurapa, nevamwe vazhinji. Sezvo indasitiri yekuvaka yashanduka saka vave neanodzora vamiriri vane tarisiro yemhando yepamusoro yehutsanana, kuwanikwa uye kuoneka munzvimbo yako uye nekunzwisisa kuri nani kwenzvimbo yakavakirwa inodiwa kumhanyisa chinotungamira chepamberi chirimwa.
Kana purojekiti yako ichisanganisira kuoneka kwenguva dzose kwevatongi kana vatengi, inoda kuzogadzikika kune mamwe marongero emangwana, kana yakatemerwa kuve muzinda wekunaka kune yako indasitiri kana chikamu, wozoshandisa modular cleanroom masisitimu akakodzera kusangana nezvinodiwa zve chirongwa chako. Kana iwe uine chero mibvunzo, Inzwa wakasununguka kubata Airwoods nhasi! Isu tiri yako-yekumira shopu kuti uwane yakakwana yekuchenesa mhinduro. Kuti uwane rumwe ruzivo nezve yedu yekuchenesa kugona kana kutaura nezve yako yekuchenesa zvirevo nemumwe weavo nyanzvi, taura nesu kana kukumbira quote nhasi.
Kubva 2007, Airwoods yakatsaurirwa kupa yakazara hvac, yakachena imba uye VOC kurapwa mhinduro kumaindasitiri akasiyana. Isu tinovavarira kuendesa yakanaka yekuvaka mweya yemhando yepasirese nemagetsi anoshanda zvigadzirwa, mhinduro dzakakwidziridzwa, mitengo isingadhuri uye makuru masevhisi.